Akhri: Dowladda Soomaaliya oo soo saartay war u muuqday inuu jawaab u yahay Somaliland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in iyada oo la tixraacayo heshiiskii Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay ku gaareen magaalada Djibouti bishii Disembar 2014, ay Dowladda diyaar u tahay dardargelinta wadahadlka labada dhinac.
Dowladda Federaalka ah ayaa sheegtay iney magaalada Istanbul u dirtay wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa, oo ka kooban Wasiirro, Xildhibaanno iyo mas’uuliyiin kale oo xag farsamo ah.
Waxey sheegtay dowladda Soomaaliya in wafdigua uu damaanad buuxda ka haysta Dowladda Federaalka, uuna diyaar u yahay in uu la fariisto Wafdiga Somaliland oo isaguna ku sugan Istanbul si loo guda galo wadaxaajood ku salaysan qodobbadii ay ku heshiiyeen labada Madaxweyne, oo ay ka mid tahay in la billaabo ka hadalka arrimaha siyaasadda ee masiiriga ah ee ka dhexeeya labada dhinac.
“Wafdiga Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxaa ka go’an in uu dadaal walba ku bixiyo midnimada Jamhuriyadda Fedraaalka ee Soomaaliya” ayaa lagu yiri war ay soo saartay dowladda Soomaaliya.
Dowladda Federaalka ah oo u mahadcelisay Turekiga ayaa tiri “Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay uga mahadcelineysaa Dowladda Turkiga martigelinta labada wafdi iyo dhiirri gelinta wadahadalka labada dhinac”.
Warkaan kasoo baxay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ymid kadib markii wasiirka arrimaha debadda Somaliland, ahana hogaamiyaha wafdiga maamulkaas, Maxamed Biixi Yoonis uu sheegay ineysan la fariisan doonin wafdiga Soomaaliya haddii lagu soo daro xubno kasoo jeeda deegaanada Somaliland.
13 ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii Hote Central oo loo qaaday UAE